ကွဲပြားခြားနားသောသုပ်ချက်ပြုတ်နည်းများတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်, အထူးရိုးရှင်းပြီးအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တစ်ခုခုချက်ပြုတ်ချင်တယ်။ "တင်ဒါ" - ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုခေါ်သောမှိုများနှင့်အတူတစ်ဦးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အားရစရာဧည့်သည်များချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာနှင့်မူရင်းသုပ်ကိုဆက်ကပ်။
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးဖျော်ရည်များတွင်မှိုများ - 1 အိုးတလုံး,
ဇီယာစေ့ - 0.5 ရောင်ခြည်;
ကြက်သွန်နီသည်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့် shinkuem သေးငယ်တဲ့ရင်ပြင်။ ထို့နောက်သူကဟင်းသီးဟင်းရွက် passeruem maslitse, ချပ်သို့ကုန်တယ်မှို add နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြော်, နူးညံ့သည်အထိနှိုးဆော်။ အာလူး, စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်အတူ ချဉ်သခွားသီး ဟာ vinaigrette ၌ရှိသကဲ့သို့ Cube သို့ဖြတ်။ ထိုအခါထိုသူတို့မြည်းစမ်းဖို့ကြော်, ဆား, ငရုတ်ကောင်း add ပြီးအစိုင်အခဲအမြှုပ်ထဲမှာယခင်ကကြာပွတ်သုပ်မုန့်နှင့်အတူဝတ်ဆင်။ လတ်ဆတ်တဲ့ဇီယာစေ့နှင့်အတူချောပန်းကန်ကိုအလှဆင်ဝတ်ပြု! ကျနော်တို့သုပ်ကိုယ်တိုင်က၎င်း၏အမည်ကိုမှတက်အသက်ရှင်တော်မူသည်သောသင်အာမခံ!
လတ်ဆတ်သောမှိုများ - 300 ဂရမ်;
ကြက်သား -200 g နဲ့;
တရုတ်ဂေါ်ဖီထုပ် - 1 ချိတ်;
မီးသီး -2PCs; ။
စည်သွတ်စိမ်းလန်းသောပဲ -6ဇွန်း။ ဇွန်း,
strips တွေသို့တရုတ်ဂေါ်ဖီထုပ် Shinkuem နှင့်သုပ်ပန်းကန်၏အောက်ဆုံးပေါ်တွင်လဲလျောင်း။ ထိုအခါ Mayonnaise နှင့်အတူပေါ့ပေါ့ဖုံးအုပ်နှင့်လာမည့်ခြေလှမ်းသွားပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ချက်ပြုတ်သည်အထိကြက်သားပြုတ်, အအေး, Mayonnaise ချောလွန်း, အမျှင်သို့ခွဲခြားနှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်၏ထိပ်ပေါ်တွင်လဲလျောင်းနေသည်။ ပြုတ်ကြက်ဥ terochke အပေါ်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်နဲ့နောကျအလွှာအိပ်လေ၏။ Next ကိုကျနော်တို့မှိုပြုတ်နှင့်ကုန်တယ်အားလုံးကုန်တယ်ကြက်သွန်တစ်ဝက်ကွင်းနှင့်ထားကိုဖုံးလွှမ်း။ စည်သွတ်ပဲစေ့တွေဟာ၏ပန်းကန်ဖြန်းများနှင့်ဆင်သင့်မှိုအစေခံ သုပ် "နူးညံ့သော" စားပွဲပေါ်မှာရန်။
အချဉ်မုန့် - 1 tbsp ။ ဇွန်း,
ogurtsy-2PCs ဆားနယ်။
Mayonnaise - 1 tbsp ။ ဇွန်း,
ကြက်ဥကို pre-အနာစိမ်း, သန့်ရှင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်နှစ်ကနေပရိုတိန်းခွဲခြား။ မှိုဆားရေထဲမှာတင်ဒါသည်အထိဆေးကြောလုပ်ငန်းများ၌နှင့်အနာစိမ်းနေကြသည်။ ထိုအခါပြားသို့ဖြတ်ရွှေသည်အထိ minced ကြက်သွန်ဟင်းသီးဟင်းရွက် maslitse နှင့်အတူ passeruem, အအေး။ အာလူးပြုတ်နှင့် Pickled သေးငယ်တဲ့အပိုငျးပိုငျး shinkuem နှင့်မဆို sequence ကိုအတွက် promazyvaya Mayonnaise ဆလတ်၏အလွှာပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ခြစ်ကြက်ဥအနှစ်နှင့်ကြက်သားနှင့်အတူပန်းကန်၏ထိပ်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်စားပွဲတစ်ခုပေါ်မှာဝတ်ပြုကြ၏။
Horseradish နှင့်အတူ Adjika
အရသာနှင့်ကျန်းမာချက်ပြုတ်နည်းများရိုးရှင်းသောဗီတာမင်မုန် - တံစဉ်များကိုအတူ beetroot သုပ်
ဆောင်းတွင်းအဘို့အခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အတူမှို caviar - တစ်စာရွက်
မီးဖို၌လှော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ - အလင်းအစားအစာများအများဆုံးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများနေ့ရက်တိုင်း
ကြက်သွန်နီနှင့်အချဉ်မုန့်နှင့်အတူ chanterelles ကြော်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မုန့်စိမ်း chebureks - ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ပြည့်စုံသောခြေစွပ်များချက်ပြုတ်လျှို့ဝှက်ချက်များ
17 kinolyapy ကျော်ကြားသမိုင်းရုပ်ရှင်
Mammary ဂလင်း၏ Fibrotic အပြောင်းအလဲများ
Periodontitis - ကုသမှု